I-Balm ye-Bee - I-Airbnb
Brule, Wisconsin, i-United States
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Matthew & Tonja
U-Matthew & Tonja Ungumbungazi ovelele
Uzosithola siqhwakele emahlathini athulile enyakatho ye-WI eduze ne-Brule River. Sisekude ngokwanele ukuba sithokozele isibhakabhaka esinezinkanyezi neziqhumane, kodwa hhayi kude nezindawo eziningi ezihamba phambili. Indawo yakho yifulethi elizimele ezisezingeni eliphansi lekhaya lethu lendaba elingu-2.5. Inendawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela, umbhede omkhulu, ikhishi elincane, umpheme wangasese osezingeni eliphansi, ukufinyelela emagcekeni ethu amahle nokuningi! Singumndeni wabaculi abathanda ukuhamba & ukwethula abanye engxenyeni yethu enhle yomhlaba.
Ukungena kalula ezingeni eliphansi ngebhokisi lesikhiye lokuzingenisa, umbhede omkhulu, i-likeeat, i-wifi, i-smart tv (enokufinyelela kwe-akhawunti ye-netflix/prime), i-DVD player & amafilimu, igumbi elikhulu le-shower, i-1 & 1/2 yokugeza, itafula elinezihlalo ezingu-2. I-patio yangasese embozwe ngokwengxenye nosofa othambile, itafula likavulande nezihlalo, izihlalo ezimbili zokuphumula, ukufinyelela etafuleni elikhulu elihlanganyelwayo lepikiniki nezihlalo, ukufinyelela emlilweni wokukhempa (kuhlanganiswe nomlilo owodwa), ukufinyelela egcekeni elihle, ichibi namabala. Yenza amaphunga emlilweni wokukhempa, sebenzisa ikhishi lakho langasese noma ujabulele izindawo zethu zokudlela zasendaweni.
Ikhishi lihlanganisa: i-pizza Pizazz-multi cooker, i-toaster, ibhodwe lekhofi, i-french press, i-mini-fridge, ifriji elikhulu ku-patio, i-microwave, i-induction burner eyodwa, i-grill yamalahle, iketela letiye, ibhodwe, ipani nezitsha, i-grill yangaphandle kanye nezitsha. Ayikho i-AC, kodwa izinga eliphansi lokuhlala lipholile (cishe ama-degree angu-72) kulo lonke ihlobo. Ukufinyelela okwengeziwe kwesiqandisi kuvulande wangaphandle.
Silungiselele i-COVID futhi silandela izinqubo ezifanele zokubulala amagciwane.
4.96 · 80 okushiwo abanye
Qiniseka ukuthi uhlola i- "Guestbook" yethu lapha ku-Airbnb, lapho sabelana khona ngezindawo ezithandwayo zasendaweni. Singemizuzu engu-5-60 ukusuka ezindaweni eziningi ezihamba phambili ezifana ne-Brule River, i-Lake Imper, i-Amnicon Falls State Park, i-Port Twin Falls, indawo yokuzijabulisa ye-Hayward Lakes, i-Bayfield, i-WI, i-Pike Lakes chain, i-Duluth, i-MN nokunye okuningi! Lena indawo yobuciko lapho ungazifaka khona ujule emvelweni, uphumule, uhlole, futhi uzithokozise. Sihlezi emakhilomitheni ambalwa nje ukusuka endaweni edumile yokudoba ngendiza, i-Brule River, nogu oluhle oluseningizimu yeLake Imper. Kunemizila eseduze yokuqwala izintaba neyamabhayisikili. Sihamba ibanga elingu- ukusuka e-Oulu Glass Gallery/i-Studio! Nakuba zimbalwa, kunezindawo zokudlela ezinhle eziseduze e-Brule nesitolo sokudla e-Iron River. Sisikisela ukuthi ufike unezinto zokudla eziyisisekelo ukuze uqalise. Isiqandisini esincane siyatholakala ukuze usisebenzise ngaphakathi futhi esikhulu siyatholakala kuwe kudekhi yakho engezansi emboziwe. Izindawo zokudlela zendawo zihlanganisa: i-Round-Up North- Brule, i-Twin Gables Cafe- Brule, i-Pizza Parlor- Iron River, i-Delta Diner e-Delta nokuningi!
Ibungazwe ngu-Matthew & Tonja
Sihamba umhlaba wonke futhi siyakujabulela ukuhlangana nabantu bethu abasha! Sifuna ukwenza iholide lakho lijabulise ngangokunokwenzeka, ngakho-ke, siyatholakala kuye ngendlela othanda ngayo, noma kancane ngokwesidingo. Ungakwazi ukufinyelela endaweni efana nefulethi ezingeni eliphansi lekhaya/i-studio sethu. Nakuba sizohlonipha ubumfihlo bakho, sicela wazi ukuthi singumndeni wabantu abangu-4; uzobona, futhi ngezinye izikhathi uzwe okwenziwayo komndeni ngezikhathi ezithile. Ungase usibone sisebenza egcekeni, sisika izinkuni, noma sidwebe engadini. Senza konke okusemandleni ethu ukugcina umsindo uphansi lapho izivakashi zikhona.
Sihamba umhlaba wonke futhi siyakujabulela ukuhlangana nabantu bethu abasha! Sifuna ukwenza iholide lakho lijabulise ngangokunokwenzeka, ngakho-ke, siyatholakala kuye ngendlela…
UMatthew & Tonja Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Brule namaphethelo